Nin soomaali ah oo loo xiray fal dil ah oo 2008-dii ka dhacay Oslo - NorSom News
Ninkan oo 33 sano jir ah ayaa boolisku raadinayeen ilaa 2008 markaas oo uu ka fakaday meeshii uu dilka ka dhacay ee xaafada Grünerløkka ee Oslo. Shalay ayay boolisku Germanku u qabteen ninkan fal danbiyeed kale, markii danbana ay ogaadeen una soo gudbiyeen kuwa Norwey.
Falkan oo dhacay 24-tii bishii Maarso ee 2008 ayaa ku nafwaayay wiil somali ah, halka mid kalena uu kasoo gaaray dhaawac. waxaana falkan ka danbeeyay labo nin, mid kamid ah ayaa booliska isku soo dhiibay 25.mars, halka ninka hada la qabteyna uu wadanka ka cararay.
Frode Sulland oo ah qareenka(forsvar-advokat) ninkan ayaa sheegay inuu qirtay danbigiisa, isla markaana la xiray 4 isbuuc. Sida uu sheegayna waxay qaadanaysaa waqti dheer inta la wada helayo dhamaan macluumaadka ku saabsan falkii dhacay 2008.
Previous articleGabar soomaali ah oo ay maxkamada sare ee wadanka ay ku wayday wax danbi ah
Next articleDowlada Norwey oo 345.8 milyan NOK ugu deeqday Somalia sanadkii 2015.
Jeg synes at dere gjør en meget bra jobb. Lykke til.